पार्टीमा तलदेखि माथिसम्म समावेशी चेहरा आउनु पर्यो जो अहिलेसम्म थिएन | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » पार्टीमा तलदेखि माथिसम्म समावेशी चेहरा आउनु पर्यो जो अहिलेसम्म थिएन
पार्टीमा तलदेखि माथिसम्म समावेशी चेहरा आउनु पर्यो जो अहिलेसम्म थिएन
saharatimes Saturday, June 18, 20160No comments
सांसद एवं नेता, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी
तपाईको पार्टीको महाधिवेशन हुँदैछ, तपाईले आफ्नो पदबाट दिनु भएको राजिनामाको बारेमा के भइरहेको छ ?
–मैले पार्टी परित्याग गरेको होइन । पार्टीको कन्द्रीय समितिबाट राजिनामा दिएको मात्रै हो । पार्टीमा छँदैछु । मैले विशेष परिस्थितिमा आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएका थिए । पार्टीले गरेको एउटा निर्णयप्रति मेरो असन्तुष्टि थियो र त्यसको विरोध गर्दै मैल राजिनामा दिएका थिए । यद्यपी त्यो हालसम्म स्वीकृत भएको छैन । जुनबेला मधेशी जनताको अस्तीत्वको लडाई हामी लडि रहेका थियौं, त्यो बेला पार्टीले नेपाली काँग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशिल कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीका लागि मतदान गरेका थिए, त्यसको विरोध गर्दै मैले राजिनामा दिएका थिए । जुन प्रधानमन्त्रीले सविधानमा मधेशीको हक अधिकार सुनिश्चित नगरि मधेशी जनतामाथि दमन
जुन कारणले राजिनामा दिनुभएको थियो, त्यसको न्याय पाउनु भयो कि भएन ?
–न्याय, अन्याय भन्दा पनि मैले पार्टी छाडेका थिइन् । पार्टीको सिस्टम भनेको पार्टीले गरेको निर्णय मानुस् या पार्टी छाड्नुस् । त्यसमा मैले पार्टी छाडेको थिइन्, निर्णयको विरोध मात्रै गरेको थिए । मैले पार्टीमा रहेकै कारणले पार्टीको निर्णय बाध्य भएर मानेका थिए तर त्यसको विरोध पनि गरे । पार्टीले गरेको निर्णयको विरुद्धमा मैले राजिनामा दिएका थिए । त्यसलाई स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने काम पार्टी अध्यक्षको हो । तर उहाँले के गर्नुभयो, मलाई थाह भएन । मैले राजिनामा दिइसकेपछि जतिपनि कार्यसमितिको बैठकहरु बस्यो, कुनैपनि बैठकमा उपस्थित भइनन् ।
तपाई राजिनामा दिनुभयो कुनै कारणले तर ती कारणको प्रतिकृया नपाएसम्म राजिनामा दिनुको उद्देश्य कसरी पुष्टि हुन्छ ?
–मैले त्यसबाट के प्रतिफल पाउने हो ? प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भइसकेको थियो । त्यसमा मतदान गर्ने निर्णयबाट पछाडि हट्ने कुरा हुँदैन्थ्यो । त्यसबाट प्रतिफल पाउने कुरै भएन । विरोध दुई किसिमले गर्न सकिन्छ । तपाई पार्टी छाड्नुस् या पार्टीमा रहेर त्यसको विरोध गर्नुस् । मैले पार्टीमा रहेर नै त्यसको विरोध गरे र राजिनामा दिएको थिए । मैले राजिनामा दिएपछि पार्टी मतदानमा भाग लिनबाट रोकिन्थ्यो वा मतदान गर्दैन्थ्यो अनि मात्र त्यो राजिनामाको उद्देश्य प्राप्त हुन्थ्यो । राजिनामा दिनुको उद्देश्य विरोध मात्र थियो, त्यो पूर्ति भयो । अब त्यस राजिनामालाई अध्यक्षले के गर्ने, के नगर्ने, त्यो उहाँको काम हो । कार्यसमितिका कुनै व्यक्तिले राजिनामा दिनु ठूलो कुरा हो । नेतृत्वले यसको बारेमा पक्कै पनि केही नकेही सोच्नु भएको होला । रिलायज पनि गर्नुभएको होला । यदि त्यो रिलायज नगरेको भए मेरो राजिनामा स्वीकृत गरेर मलाई पार्टीबाट करवाही भइसक्थ्यो होला ।
राजिनामा दिइसकेपछि पार्टी अध्यक्षबाट के कस्तो प्रतिकृया पाउनुभयो ?
–मैले राजिनामा दिइसकेपछि उहाँले मलाई बोलाएर यस विषयमा कुराकानी गर्नुभयो । विषय परस्थितिको बारेमा मलाई कन्भिन्स गर्ने प्रयास गर्नुभयो । तर, म उहाँको कुराबाट सन्तुष्ट हुन सकिन । त्यसबेलासम्म महाधिवेशनका कारण कार्यसमिति नै भंग भइसकेको थियो । त्यसैले त्यो केन्द्रीय सदस्यको कुनै महत्व पनि भएन । म पार्टीको साधारण सदस्य भएको नाताले मैले पार्टीमा काम गरिरहेको छु ।
तपाईको राजिनामा स्वीकृत भएको छैन, महाधिवेशनमा कस्तो भूमिका हुन्छ ?
–केन्द्रीय सदस्य नै डिजल्व भइसकेपछि स्वतः सबैजना हटिसकेपछि सबैको भूमिका बराबर भयो । अब महाधिवेशनबाट नै को कहाँ रहने हो, कसको भूमिका के हुने हो तय हुन्छ ।
भन्दाखेरि जुन कारणले तपाई राजिनामा दिनुभयो त्यो मुद्दा अब बाँकी छैन ?
–अब छैन । त्यो मुद्दा सिधि सक्यो । प्रधानमन्त्रीको चुनाव पनि भइसक्यो । कुनै कुरा यस्तो हुन्छ जो फिर्ता हुन्छ । मतदान गरिसकेको कुरा फिर्ता पनि हुँदैन । त्यसैले त्यो मुद्दा अब बाँकी छैन । मैले निर्णयको विरोध मात्र गरेका थिए । त्यो निर्णय किन भयो, त्यसको बारेमा पार्टीमा छलफल हुनुपथ्र्यो । मेरो माग त्यति नै थियो । कुनै व्यक्तिले कुनै निर्णय गरेर हुँदैन भनि त्यसको विरोध गरेका थिए । त्यो सच्याउन उहाँहरु तयार हुनुभयो । गल्ती भएको कुरा स्वीकार गर्नुभयो । अगामी दिनमा यसको बारेमा छलफल गर्दै जान्छौं । अब महाधिवेशन हुँदैछ । आशा गरौं अब ती कुराहरु दोहोरिने छैन ।
त्यसो भए तपाईको बिचारमा पार्टीले सुशिल कोइरालालाई मतदान गर्नु गलत थियो ?
–हो त्यो गलत हो । मैले अघि पनि भनेका थिए कि जुन प्रधानमन्त्रीसँग हामी अधिकारको कुरा गरिरहेका थियौं । उहाँले गरेका निर्णयको विरुद्धमा हामी सडकमा थियौं । उहाँकै कार्यकालमा आन्दोलन शुरु भयो । आन्दोलनमा ४५ जनाभन्दा बढीको हत्या भएको थियो भने हामी कुन मुखले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मतदान गरियौं ? त्यो कारणले मैले विरोध गरेका हौं ।
तपाईका पार्टीका अध्यक्षले भन्नुहुन्छ कि रणनीतिक तहत मतदान गरेका हौं, तीन दलको गठबनन्धन फुटाउनका लागि मतदान गरेका हौं, तपाईलाई के लाग्छ ?
–मेरो विचारमा तीन दलको गठबन्धन फुटेकै छैन । नौटकी गरिहेका छन् । पहिले काँग्रेस र एमालेको सरकार बनेको थियो । मधेशबाट अलग गरेर मधेशलाई दवाउन भूकम्पको बाहनामा माओवादीलाई पनि सरकारमा सहभागि गरायो । अब तीनै दल त्यहाँ भए । सुशिल कोइरालालाई थाह थिएन कि म प्रधानमन्त्री बन्दैछु । प्रधानमन्त्रीमा जित्दैछु । बरु उहाँले नै रणनीतिक ढंगबाट हामीलाई फुटाउने काम गर्नुभयो । जनताको नजरमा गिराउने काम गर्नुभयो । हामीलाई उहाँले प्रयोग गर्नुभयो । अन्तराष्ट्रिय रुपमा देखाउनका लागि कि हेर्नुस् आन्दोलनकारीले पनि सविधान मानेको छ । र, काँग्रेसलाई एउटा बहाना भएको छ कि मैले त मधेशका समस्या समाधान गर्न चाहेको छु तर एमालेले मानिरहेका छैन । त्यसैले तीनटै दलले मधेशको माग पूरा गर्ने पक्षमा छैन । यदि मधेशको माग पूरा गर्न चाहेको भए । सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री भएकै बेला धेरै थोक पूरा हुन्थ्यो । एकपटक पनि मधेशको समस्या समाधान नगरिकन म प्रधानमन्त्री छाड्दिन भनेको भए एमाले नाक घस्रेर मधेशको माग पूरा गराउन बाध्य हुन्थ्यो, किनभने एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री जो बन्नु थियो । तर त्यो बेला तीनटै दल मिलेर मधेशवादी दललाई दवाउने काम गर्यो । जबर्जस्ती आन्दोलनमा धकेल्ने काम गर्यो ।
तपाई मात्रै यस्तो भन्नुहुन्छ, मधेशी मोर्चाका सबै नेताहरुले त काँग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ, सरकार ढाल्न सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनि रहेका छन् नि ?
–म त्यो पक्षमा छैन । मधेशी मोर्चाले यदि त्यस्तो सोचिरहेका छन्, त्यस्तो गरिरहेका छन् भने त्यो गलत हो । जुन समाजबाट हामी प्रतिनिधित्व गर्छौ त्यो समाजले के भन्छ भने जुनबेला हाम्रो हातमा हुन्छ त्यो बेला मात्र हामी दिनसक्छौ । अरुको हातबाट दिन सक्दैनौ । सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला दिन चाहेको भए दिन सक्नुहुन्थ्यो । काँग्रेसको इच्छा थियो कि यत्रो लामो राजनीतिक इतिहास भएको कारणले आफ्नै नेतृत्वमा सविधान जारी गर्न पाउन् । माओवादीको के थियो भने यत्रो जनयुद्ध गरेर आएको सविधान निर्माणको जस लिहालौ । सविधाानसभाबाट सविधान जारी हुन सकेन भने जनयुद्धको कुनै अर्थ रहदैन, जेजस्तो भएपनि सविधान जारी गरि हालौ भन्ने थियो । एमालेलाई के थियो भने एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नु थियो । उसले जसरी जस्तो भएपनि हतार हतारमा सविधान जारी गर्न चाहेका थिए र त्यस्तै भयो । अर्थात तीनैजनाको स्वार्थ त्यहाँ मिलेपछि यस्तो भएको हो । यदि सुशिल कोइरालाले मधेशीको माग पूरा नभएसम्म सविधान जारी गर्दिन भनेको भए केपी ओली लुथ्रक्कै हुन्थे । त्यही बेला सबै समाधान हुन्थ्यो । के अब काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने मधेशको समस्या समाधान हुन्छ त ? हुँदैन । कोही प्रधानमन्त्री बन्ला, कोही मन्त्री बन्ला त्यो छुट्टै कुरा हो तर मधेशको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहन्छ । त्यसैले मधेशको हकमा तीनटै दल एउटै हो । मधेशको समस्या कसैले समाधान गर्न सक्दैन । समाधानको एउटै विकल्प हो संघर्ष ।
सबैले काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भनि लागि परेका छन् तपाई एक्लैले विरोध गरेर के हुन्छ ?
–मैले काँग्रेस, एमाले वा माओवादीको विरोध गरेको होइन । म सिद्धान्तको विरोध गरेको हुँ । मधेशप्रति उनीहरुको सोच र दृष्टिकोणको विरोध गरेको हुँ । अरुको के स्वार्थ छ, मलाई थाह छैन । तर मलाई कुनै स्वार्थ छैन । मलाई थाह छ, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी मधेशको हक, हित र अधिकारका लागि गठन भएको पार्टी हो । आन्दोलनबाट स्थापित भएको पार्टी हो । उनीहरुको हकहितका लागि लड्नु पर्ने हो । यदि त्यसैको खिलाफ (विरुद्ध) मा पार्टी गयो भने पार्टीको एउटा कार्यकर्ता, एउटा सिपाही भएका कारणले म त्यसको विरोध गर्छु । कसैलाई लाग्ला म पार्टीको विरुद्धमा छु तर होइन, म सिद्धान्तको पक्षमा छु । त्यो एक दिन एकदिन प्रमाणित हुन्छ ।
मधेशमा आन्दोलन जारी छ, १० वर्षपछि तपाईको पार्टीको महाधिवेशन हुँदैछ, यस अवस्थामा पार्टीको सिद्धान्त र विचारमा केही फरक आउँछ कि यथास्थितिमा रहन्छ ?
–नेपालको राजनीतिकमा दुईटा धार छ । एउटा डमोक्रेटिस र अर्को कम्यूनिष्ट । हाम्रो पार्टी डमोक्रेटिस धारको पार्टी हो । हाम्रो कार्यक्षेत्र भनेको मधेश हो । मधेशको एजेण्डामा काम गर्ने हो । मधेशी जनताका लागि संघर्ष गर्ने हो । तर, दुर्भाग्य भनौ वा के भनौं अरु ठाउँमा कम्यूनिष्ट डाउन छ भने हाम्रोतिर अपमा छ । काँग्रेस पनि पकड मधेशमै छ । यस्तो परिस्थितिमा काँग्रेसको विकल्प जनतालाई दिनुपर्छ । देशैभरि नहोला तर मधेशमा त सकिन्छ नि । कमसे कम मधेशमा काँग्रेसको विकल्प तमलोपाले दिन सक्नुपर्छ र दिन्छ पनि त्यो महाधिवेशन पछि देखिन्छ नै । किनभने जनताले राम्रो डमोक्रेटिस पार्टी खोजिरहेको छ । मधेशको बारेमा बोल्नु नै छ तर देशैभरिका उत्पीडित समुदायको बारेमा पनि पार्टीले बोल्नुपर्छ ।
तपाई त्यस्तो भन्नुहुन्छ तर मधेशवादी दलहरु आफैमा यसरी उल्झेका छन् कि काँग्रेस, एमाले वा माओवादीको विकल्प कसरी दिनसकिन्छ ?
–यस्तो त हरेक पार्टी तथा हरेक क्षेत्रमा हुन्छ । उल्झन र विवाद सबैतिर हुन्छ तर त्यसलाई चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । के काँग्रेसभित्र विवाद छैन, एमालेभित्र विवाद छैन, माओवादीभित्र विवाद छैन । ती पार्टीहरुमा जति विवाद छ त्यति त हाम्रो पार्टी वा मोर्चामा पनि छैन तर हाम्रो विवादलाई मात्रै हेर्छन् । उनीहरुको पार्टीमा पनि खुट्टा ताना तान हुन्छ । तर, मेरो विचारमा जो आफैमा मजबुत (बलियो) हुन्छ । सिद्धान्त र विचार राम्रो हुन्छ त्यसको जति खुट्टा तानेपनि उ अगाडि बढ्छ नै । त्यो सँग घबराउने (डराउने) काम गर्नुहुन्छ । मधेशको मात्र होइन, देशकै डमोक्रेट पार्टीको रुपमा तमलोपा आउँनुपर्छ ।
त्यसको सुत्र के हो त ?
–मुख्य कुरा विचार हो । र, महाधिवेशनबाट त्यो कुरा तय हुन्छ कि अब हामी कसरी अगाडी बढ्ने । नेपालमा विकल्पको रुमपा तमलोपालाई कसरी अगाडि ल्याउन ती विषयहरुमा छलफल हुन्छ । जुन शोषित, उत्पीडन समुदायहरु छन् त्यसको लागि कसरी लड्ने उसको लागि कसरी अवाज उठाउने त्यसको बारेमा व्यापक छलफल हुन्छ ।
महाधिवेशनपछि अरु दलभन्दा विचार र सिद्धान्तमा के फरक हुन्छ ?
–राजनीतिक गर्दा विचार र सिद्धान्त सबैको एउटै हुन्छ तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु मुख्य कुरा हो । कुनै पनि पार्टीको सिद्धान्त, विचार र मुद्दा खराब छैन । पढ्दा सबैको प्रगातिशिल नै लाग्छ तर त्यो लागु कतिको भएको छ त्यो मुख्य कुरा हो । काम गर्ने शैलीका कुरामा पनि भर पर्छ । हामीले समावेशीका कुरा गर्छौ । हाम्रो पार्टीमा पनि तलदेखि माथिसम्म समावेशी चेहरा (अनुहार) आउनु पर्यो जो अहिलेसम्म थिएन । सबै समुदाय र जातका व्यक्तिले फिलिगं गरोस् कि यो हाम्रो पार्टी हो भनेर । टपटपमा सबै ठूलाबडा नेता बस्ने अनि तलतल उत्पीडित र कमजोरहरुलाई राख दिने यो तरिकाले हुँदैन । सबैको सम्मान समावेशी हुनुपर्छ ।
तपलोपा समावेशी पार्टी होइन, एउटा कुनै जात विशेषको बर्चस्व भएको पार्टी हो भनि आरोप लागि रहेको छ, महाधिवेशनमा यसमाथि बहस हुन्छ कि हुँदैन ?
–अहिलेसम्म हाम्रो पार्टी तदर्थवादमा थियो । पूर्णरुपले संगठनात्मक संरचनामा गइसकेका थिएन । महाधिवेशन पनि पूर्ण समावेशी भएको पार्टी पाउनु हुन्छ विश्वास गर्नुस् ।
पार्टी महाधिवेशन गर्न १० वर्ष किन लाग्यो ?
–सबैलाई थाह भएकै कुरा हो । हाम्रो यो पार्टी कुन अवस्थामा कसरी गठन भयो । आन्दोलनको बेलामा गठन भयो । आन्दोलनपछि तुरुन्तै सविधानसभा चुनावमा गयो । चुनाव भएपछि सविधान निर्माण गर्ने देखि लिएर विभिन्न राजनीतिक लफडाहरु भइरह्यो । चारवर्षपछि सविधानसभा नै विघटन भयो । फेरि चुनावमा जानु पर्यो । त्यसपछि फेरि त्यही लफडा सविधान निर्माणको प्रकृया शुरु भयो । आन्दोलन पनि शुरु भयो । पार्टी त्यसैमा सक्रिय भए । समय गएको पत्तै भएन । अहिले आएर हामी महाधिवेशन गर्दैछौ । तयारी पहिलादेखि नै हुँदै थियो । जिल्ला अधिवेशन पहिला नै भइसकेको थियो । अब केन्द्रीय अधिवेशन गर्दैछौ ।
अन्त्यमा, महाधिवेशनबाट पुनः महन्थ ठाकुर पार्टीको नेतृत्वमा आउनु हुन्छ कि अरु कोही आउँदै हुनुहुन्छ ?
–अहिलेसम्म त उहाँ नै हो । उहाँको विकल्प खोजिएको छैन । कोही अगाडि आउनु भएको छैन । कसैको नाम पनि आएको छैन । महाधिवेशन हुने बेलासम्ममा कसैको नाम आउँछ भने त्यो थाह छैन तर अहिलेसम्म महन्थ ठाकुरजी नै हुनुहुन्छ ।
जुन गतिमा पार्टीलाई अगाडि बढाउन खोज्नु भएको छ, त्यो गतिमा हिड्न महन्थ ठाकुर सक्नुहुन्छ त अब ?
–एउटा घरमा असल गर्जियन बसेको हुन्छ, त्यसले पनि धेरै सहारा दिएको हुन्छ । त्यसले पनि परिवार गति लिएका हुन्छन् । त्यस्तै गार्जियनको रुपमा महन्थ ठाकुर हुनुहुन्छ । उहाँ अफिसमा आएर बसि दिएपनि हाम्रो लागि धेरै इनर्जि हो । कुनै ठाउँमा गएर उहाँ उभि दियो भने पनि हाम्रो लागि धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो । पार्टी अध्यक्षले चलाउने होइन, उहाँले त दिशानिर्देश गर्ने हो । कार्यकर्ता परिचानलन गर्ने हो । नीति निर्माण गर्ने हो । जो कुरा अहिलेसम्म हामी उहाँबाट पाइरहेका छौ । उहाँ एउटा गार्जियनको भूमिका राम्री निभाइ रहनुभएको छ । उहाँले महाधिवेशनबाट कस्तो टीम बनाउनु हुन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ ु।